Ithegi: seo organic | Martech Zone
Ithegi: seo organic
Ukunyanga ukuthengisa okuhlawulelweyo kunye nentengiso engumnini ngokwahlukeneyo kweendleko kubathengisi, inqanaba kunye nengeniso. Uninzi lwentengiso luvavanya amajelo ngokwahlukeneyo, okanye, ukwahlulahlula ukuhlawula, ukurhola, kunye nentengiso ephethwe ngabanini. Isiphumo? Ushiya i-50-100% yeziphumo zakho ezinokubakho etafileni. Kutshanje ndibuze phantse i-CMOs ezilikhulu kunye nabaphetheyo kwezentengiso: Zenza njani iimpembelelo zentengiso ezihlawulelweyo kunye nezikhuthazayo? Iimpendulo zabo beziqonda ngokumangalisayo, kwaye zinika ubungqina obunamandla bokuba abathengisi kufuneka bafune kwaye baxhaphaze ii-synergies
Ukuba ufuna ukuqonda ukusebenza kweinjini yokukhangela, kuya kufuneka uyeke ukumamela abo bakushishino abafuna ukungenelwa kulo kwaye ubilise kwiingcebiso zikaGoogle. Nanku umhlathi omkhulu ovela kwisiKhokelo sokuQala ukuSebenzisa iiNjini zoKhangelo: Nangona isihloko sesi sikhokelo sinamagama “injini yokukhangela”, singathanda ukuthi kufuneka ubeke izigqibo zakho zokusebenzisa kuqala kwaye eyona nto ilungele iindwendwe zakho
NgoLwesine, Agasti 12, 2010 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ndingumlandeli omkhulu weRandi Fishkin kunye neSEOmoz. Rhoqo ndiva ukumbombozela kwishishini lokuSebenzisa iiNjini zokuKhangela malunga ne-SEOmoz ukuba ichanekile okanye ayilunganga… kodwa okwangoku andikaboni mbutho mnye uqokelela izixhobo ezininzi, iingcali, izixhobo kunye novavanyo ngokubhekisele kwi-SEO. IRandi, ngokwakhe, sesinye isizathu sokuba ndiyithande i-SEOmoz. Kutshanje, xa ndifumene imeko engaqhelekanga nenye yeesayithi zabaxumi bam kumaphepha abo (izigidi zamaphepha),